We She Me: ကျွန်တော်မသိတဲ့ ကျွန်တော့် Hero
imaginary clouds no2 - 7/4/07, 3:16 AM
ရဲဘော်ကို လေးစားပါတယ် ရဲဘော် (ယိစ်)
Phyo Wai Kyaw - 7/4/07, 11:27 AM
Watch here for his music video, I don't know what language, but good to listen. http://phyowaikyaw.blogspot.com/2006/07/blog-post_30.html
TZA - 7/5/07, 2:29 AM
ဟိုးတလောကတော့ သူ့ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ညီမဆိုလားဘာဆိုလား ဥပဒေနဲ့ ကိုင်တုပ်မယ်ပြောတယ်ကြားတယ်.. စီးပွားဖြစ် သုံးခဲ့သမျှ တစ်ပုံကို one cent ပဲ ပေးပါစေအုန်း.. သူဌေးဖြစ်မှာ အသေအချာပဲဗျ။
pandora - 7/5/07, 3:24 AM
ပန်ဒိုရာလည်း စသိတဲ့ အရွယ်ကတည်းက ချေ ကို သဘောကျခဲ့တယ်..
ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးပဲ ရဲဘော်.
Andy Myint - 7/5/07, 11:50 AM
ဟုတ်တယ် ရဲဘော် (အဟဲ..) အဲဒီ ပုံက ဘယ်လို ညှို့ဓါတ်တွေ ရှိနေလဲ မသိပါဘူး။ အစွဲအလမ်းကြီး စွဲလမ်းပြီး အစွမ်းသတ္တိ တစ်ခုခု ကိုယ့်ကို ပေးနေသလိုမျိုးပဲ။ ကျွန်တော် သုံးထားသမျှ 1c ပြန်ပေးရမယ်ဆိုလည်း ငါးမူး၊ တစ်မတ်တော့ ပြန်ပေးရမယ်။ အပြန်အလှန် လေးစားပါတယ် ရဲဘော်တို့ …ယိစ်
Thiha Kyaw Zaw - 7/7/07, 4:14 PM
ချေဂွေဗားရား ဟာ အင်မတန်မှ စိတ်ထား မွန်မြတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူ့ ကိုတစ်ခါက သတင်းထောက်တစ်ယောက်က ဆရာဝန်မလုပ်ဘဲ ဘာဖြစ်လို့ တော်လှန်ရေးလုပ်နေရသလဲလို့ မေးတော့ သူက ဆရာဝန်လုပ်ရင် လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကိုပဲ ကုပေးနိုင်မယ်၊ သူက လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကုစားပေးချင်လို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေရတာပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ အထုပ္ပတ္တိဖတ်ခဲ့တုန်းက စာအုပ်ရဲ့ အစပိုင်းမှာပဲ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျခဲ့ရတဲ့၊ ဒီနေ့ အထိခေါင်းထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတဲ့ အချက်တစ်ခုကို သွားတွေ့ တယ်။ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ချေဂွေဗားရားဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျန်းမာရေး အလွန် ချူချာတယ်။ ကျောင်းနေရမယ့် အရွယ်အထိ ကျောင်းမနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူ့ အမေကပဲ အိမ်မှာစာသင်ပေးခဲ့ရတယ်။ သူ ကျောင်းနေရမယ့် အရွယ်အထိ ကျောင်းမနေဖြစ်တော့ သူတို့ နေတဲ့မြို့ က ပညာရေးမှူးက အိမ်တိုင်ရာရောက်လာပြီး ဘာဖြစ်လို့ ဒီကလေးကို ကျောင်းမထားရတာလဲ ဆိုပြီး လာ စုံစမ်းတယ်။ ဒါနဲ့သူ့ အမေက အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး သူ ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာ စာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတာက အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဆိုတာ အကြီးကြီးပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့သူတို့ နိုင်ငံက အာဏာပိုင်တွေဟာ ကျောင်းနေသင့်တဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ကျောင်းမနေဖြစ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လို လုပ်သိနေရတာလဲ။ ဒီခေတ်မှာလို့Computer System တွေလည်း မရှိဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို ခုလို စောင့်ကြည့် နေနိုင်တာလဲ၊ အဲ့ဒီ အချိန်က သူတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စနစ်ကို တော်တော်အံသြသွားတယ်။ တပြိုင်နက်တည်း စဉ်းစားမိတာက တချိန်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို စနစ်မျိုးလုပ်ရမယ်။ Computer System အကြီးကြီးဆောက်၊ ကလေးတွေ မွေးကတည်းက ကလေးတွေရဲ့ မွေးစာရင်းကို Database ထဲထည့်ပြီး နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း ၅ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကျောင်းမှ အပ်ရဲ့လားဆိုပြီး ကျောင်းအပ်တဲ့ စာရင်းနဲ့ တိုက်စစ်ရမယ်။ အဲ့ဒီ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်လောက်ထဲက ကျွန်တော် အလိုစဉ်းစားမိတယ်။ ကွန်ပြူတာကလည်း စလေ့လာခါစဆိုတော့ Oracle Database ကြီးသုံးပြီး တိုင်းပြည်စီမံခန့် ခွဲဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ Computer System ကြီးတစ်ခု ရှိရမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ဖူးတယ်။
Thyda - 8/20/07, 11:23 PM
Andy Myint - 8/21/07, 2:32 AM
ကျွန်တော် အဲဒီ စာအုပ်ကို ကြီးမှ နည်းနည်း ဖတ်မိတယ်။ ဒါတောင် ဆုံးအောင် မဖတ်လိုက်ရဘူး။
ကိုဇေယျာ - 8/16/08, 8:38 AM
thanks so much ko andy